४ दिनमा युनिभर्सलको आईपीओमा ६२ प्रतिशत मात्र आवेदन | गृहपृष्ठ
Home लगानी ४ दिनमा युनिभर्सलको आईपीओमा ६२ प्रतिशत मात्र आवेदन
on: २८ माघ २०७५, सोमबार १७:२८ लगानी
४ दिनमा युनिभर्सलको आईपीओमा ६२ प्रतिशत मात्र आवेदन
माघ २८, काठमाडौं (अस) । माघ २५ देखि सर्वसाधारणलाई आईपीओ जारी गरेको युनिभर्सल पावर कम्पनीको चार दिनमा ६२ प्रतिशतका लागि मात्र आवेदन परेको छ । विक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलले सोमवारसम्ममा ५८ हजार ५९ जना आवेदकले रू. ५३ करोड ९९ लाख १० हजार बराबरको ५३ लाख ९९ हजार १ सय कित्ता शेयरको लागि आवेदन दिएको जानकारी दिएको हो । कम्पनीको आईपीओ खरीदका लागि आवेदन दिने छिटो अवधि मंगलवार रहेको थियो । तोकिएको अवधिमा पूर्ण आवेदन नपरे ढिलो अवधि फागुन २६ गतेसम्मको समय लागू हुनेछ । यस अवधिभित्र तोके बमोजिम आवेदन परे सोही मितिमा विक्री बन्द गरिने क्यापिटलले जानकारी दिएको छ ।
कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानियलाई पहिलो चरणमा शेयर विक्री गरी दोस्रो चरणमा ८६ लाख ७४ हजार ४ सय ९२ कित्ता आईपीओ सर्वसाधारणलाई जारी गरेको हो । यसअघि कम्पनीले आयोजना प्रभावित दोलखा जिल्लाका स्थानीयका लागि २१ लाख ३ सय ५० कित्ता आईपीओ बाँडफाँट गरिसकेको छ । सर्वसाधारणले न्यूनतम ५० कित्ता र अधिकतम ५० लाख कित्तासम्म शेयर खरीदका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । इक्रा नेपालले यो आईपीओको आधारभूत पक्षलाई औसतभन्दा तल रहेको जनाउने ग्रेड ४ रेटिङ प्रदान गरेको छ । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब १३ करोड रहेको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्र र सर्वसाधारणको लागि आईपीओ जारी गरेपछि कम्पनीको पूँजी रू. २ अर्ब १० करोड पुग्नेछ ।
प्राथमिक बजारमा लघुवित्त कम्पनीहरुको आईपीओ विक्री खुला भएको पहिलो दिनमै तोकेभन्दा बढी आवेदन पर्ने गरेको अवस्थामा जलविद्युत कम्पनीका शेयरमा भने लगानीकर्ताहरुको आकर्षण कम देखिएको छ । दोस्रो बजारमा सूचीकरण भएकामध्ये आधा जसो कम्पनीको शेयर मूल्य अंकित मूल्यभन्दा तल झरेकाले पनि लगानीकर्ता अन्योलमा परेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
युनिभर्सल पावरको आईपीओ बाँडफाँट बुधवार, सबै आवेदकले शेयर पाउने
१३ फाल्गुन २०७५, सोमबार १६:२२
युनिभर्सल पावरको आईपीओमा आवेदन दिने आइतवार अन्तिम दिन
११ माघ २०७५, शुक्रबार १८:५५
युनिभर्सल पावर कम्पनीको आईपीओ पुस १५ देखि आउँदै
६ पुष २०७५, शुक्रबार २०:२७
युनिभर्सल पावर कम्पनीको आईपीओ आउँदै, सेबोनमा स्वीकृत
२८ मंसिर २०७५, शुक्रबार १०:३३